नयाँ M1 संग नयाँ MacBook पेशेवरहरू जस्तै व्यवसायहरू | म म्याक बाट हुँ
नयाँ M1s संग नयाँ MacBook Pros जस्तै व्यवसायहरू
18 मा प्रस्तुत गरिएको नयाँ म्याकबुक प्रो बोक्ने नयाँ प्रोसेसरहरू आश्चर्यजनक छन्, यसमा कुनै शंका छैन। कि नयाँ ल्यापटपहरू अमेरिकी कम्पनीको नयाँ प्रिय बन्न पुगेका छन्। यो सबै खबर हामीलाई पहिले नै थाहा थियो, तर के कम्पनीहरूले आफ्ना इन्जिनियरहरूलाई M1 Pro Max सँग नयाँ म्याकबुकहरू उपलब्ध गराउँदैछन्, यो एप्पल कम्पनीको लागि नयाँ र धेरै लाभदायक कुरा हो।
ट्विटर, उबर र धेरै अन्य प्राविधिक कम्पनीहरूले आफ्ना इन्जिनियरहरूको म्याकहरू सबै-शक्तिशाली MacBook Pro M1 Max सँग 64GB RAM को साथ अपग्रेड गर्दैछन्। यो सानो कुरा जस्तो देखिन्छ, तर हामी दुई प्रख्यात अनलाइन कम्पनीहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं। त्यो हो, क्षमताहरू र उच्च-क्षमता प्रदर्शनको लागि आवश्यकताहरू र द्रुत प्रतिक्रियाहरूको आवश्यकताको साथ।
उबर कम्पनीको इन्चार्जमा एक व्यक्ति, मह्यार म्याकडोनाल्ड, ट्विटरमा साझा गरिएको छ कि "उबरका सबै सक्रिय आईओएस इन्जिनियरहरू 1GB RAM को साथ 16" MacBook Pros M64 Max मा अपग्रेड गर्दैछन्। उनी यो पनि भन्छन् कि यसमा नयाँ कामदारहरू समावेश छन्, जसले उनको पोस्ट धेरै लोकप्रिय बनायो।
Uber मा सबै सक्रिय iOS इन्जिनियरहरू 16GB RAM को साथ 1 "M64 Max MacBook Pros मा अपग्रेड भइरहेका छन्, जसमा नयाँ हायरहरू समावेश छन्! छिटो मेसिनको प्रतीक्षा गर्दै।
- मह्यार म्याकडोनाल्ड (@ mahyarm8) नोभेम्बर 1, 2021
एक हप्ता पछि, एक वरिष्ठ ट्विटर कर्मचारी, जॉन Szumski, समान समाचार साझा: “म ट्विटरका सबै iOS र एन्ड्रोइड इन्जिनियरहरूमा पूर्ण रूपमा लोड गरिएको MBP M1 Max रोल आउट गर्न पाउँदा उत्साहित छु! हामी दुबैमा सुधार देखिरहेका छौं थर्मल नियमन मा जस्तै शीर्ष-अफ-द-लाइन प्रदर्शन जसले हाल हाम्रो इंटेल निर्माणलाई असर गर्छ।
Gergely Orosz, प्राग्मेटिक इन्जिनियरबाट, यो पनि नोट गरियो कि यी कम्पनीहरू बाहेक, Shopify पनि ईन्जिनियरहरूलाई "नवीनतम M1 MacBook प्रोहरू प्रदान गर्दैछ।
यस्तो देखिन्छ कि कम्पनीहरूमा प्रवृतिमा यो परिवर्तनको कारण नयाँ र मूल्यवान उत्पादकता हो जुन नयाँ एप्पल कम्प्युटरहरूसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि एक कम्पनी तपाईले खर्च गर्नु भन्दा बढी प्राप्त गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ, त्यसो भए यो यसको लायक छ र नयाँ M1 प्रो र म्याक्सको साथ नयाँ म्याकबुक प्रोहरूसँग के हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » नयाँ M1s संग नयाँ MacBook Pros जस्तै व्यवसायहरू
Epic वा Spotify ले अझै तिनीहरूलाई अद्यावधिक गर्दैन।
मानिसलाई जवाफ दिनुहोस्
MacBook Pro M1 सँग कसरी गीत रेकर्ड गरिएको छ हेर्नुहोस्
एप्पलले नयाँ सामग्री सिर्जना गर्न २० औं टेलिभिजन निर्माता एरिन मेलाई काममा राख्छ